I-Semalt: Ibhizinisi Elimncane Njengenhloso Yezintandokazi Zabagebengu Be-Cyber
Izinto zazivamile eMNH Platinum, inkampani ephathelene nokuqasha imoto. Okuncanebabesazi ukuthi nje ukuchofoza kokuxhumanisa kwe-imeyili cishe kwakuzobeka ibhizinisi engozini.
Ekuqaleni konyaka odlule, inkampani esekelwe e-Blackburn ithola amafayela angu-12, 0000 akhona kwenkampaniinethiwekhi encrypted. Ngokulandelayo, izigebengu zazifuna isihlengo esingama £ 3,000 ukuze zichithwe amafayela.
Ngayo yonke imizamo yokususa igciwane ngaphandle kokulahlekelwa idatha ebalulekile ebonakala ingenakwenzeka,inhlangano yayingenayo ikhetho kunokukhokha. Umqondisi wokuphatha inkampani uMark Hindle wathi babengakulungele ngokuphelelengenxa yokuhlaselwa kwe-cyber ngenxa yokungahoxiswanga okushiwo ukuhlaselwa okunjalo kunkampani.
Leli cala akuyona eyedwa kanye nabachwepheshe abaqaphele ukuthi amabhizinisi amancane ayikhookuvame ukwesatshiswa kokuhlaselwa kwe-cyber kusukela ezimweni eziningi bengakulungele.
u-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ixoxa ngezindlela zokugebengu ze-cyber ezihlasela ibhizinisi elincane.
Ngokomlando, Amabhizinisi Amancane Nama-Medium (ama-SME) akuyona into ejwayelekile yokulwa nobugebengu be-cyberkodwa ngo-2015, uToni Allen, uthi izinto zashintsha kakhulu. Ngokwenhlolovo eyenziwe nguhulumeni mayelana nokuphulwa kwezokuphepha,Amaphesenti angama-75 amabhizinisi amancane abike ukuthi kungenzeka ukuhlaselwa ngo-2012 kanti izitayela zanda ngo-2013 no-2014..
Izibalo ezivela eSyantec, inkampani ephethe ukuphepha kwe-cyber ikhombisa ukuthi ngaphezu kwengxenyeumkhonto wokuhlaselwa ngokuphanga okwenziwa nge-imeyili ngo-2012 wawubhekene namabhizinisi amancane.
Umthetho omusha we-Yurophu wenza ukukhishwa kwezokuphepha kwe-cyber kuma-SME kubaluleke nakakhulungoba banenjongo yokulondoloza idatha yamakhasimende. Umthethonqubo osanda kuthuthukiswa uzokudlala ngo-2018 futhi ungabangelainhlangano ikhokhiswa ngamaphesenti angu-4 emali engenayo yonyaka noma i-€ 20m noma yikuphi okukhulu ukuvumela ukuphulwa kokuphepha ukuphazamisengedatha yekhasimende.
Izigebengu zibona ama-SME njengenhloso elula kakhulu ezimweni eziningi, yiziteshi zomvuzo omkhulu.
Umkhankaso we-Cyber ​​Streetwise, isinyathelo esiphethwe yi-Home Office siveza okulandelayonjengezingqinamba ezinkulu ezisongela ama-SME:
Ukuhlaselwa kwenzeka lapho izigebengu zifinyelela kwinethiwekhi yenhlangano ngokuzivuselelaukutholakala okungahambisani nokufakwa ngaphakathi kohlelo lokusebenza, okwenze kube lula ngabo ukufinyelela idatha yenkampani.
Iyenzeka uma ucezu lwesicelo esinonya ezimweni eziningi ezitholwa ngephuthai-imeyili ivala imininingwane enethiwekhi yenhlangano. Ngemuva kwalokho, izigebengu zicela isihlengo ezingamaphesenti angu- £ 500- £ 1,000 ukuyauthola ukhiye wokumisa.
Ezimweni eziningi, abantu bayisixhumanisi esiphezulu kakhulu kunketho elinikeziwe lokuphepha, futhi kubalulekileingxenye yokwaphulwa kolwazi kunomphumela wedatha ukuthi ilahlekile noma isakazwe kumuntu ongalungile. Ngisho nokuhlaselwa okuvamilekungaba nemithelela ephawulekayo ezimweni lapho kuhileleka khona i-PII ebalulekile.
Ukulahla ukuhlaselwa kwenkonzo
Uma inhlangano inomthamo omkhulu wolwazi kumaseva ayo iqhubekele iisiteshi esinonya. Lolu hlobo lokuhlaselwa lungenziwa kalula ngokutshalwa kwezimali okuncane.
Kwenzeka lapho umhlaseli ezenza umuntu ophezulu nenkampani nomaukukhwabanisa noma ukukhwabanisa i-akhawunti yabo ye-imeyili futhi kucindezela umuntu onegunya lezezimali ukwenza inkokhelo.